မတျ 6, 2019 – Healthy Life Journal
စွမ်တန်ခြောက်က ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်သလား . . .
မေး ။ စွမ်တန်ခြောက်ကို ဟင်းရည်အဖြစ် မကြာခဏ လုပ်သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်တန်ခြောက်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါသလားရှင့်။ မ၀င်းမေ(Fb) ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ စွမ်တန်ခြောက်က မုန်ညင်းခြောက်ပါပဲ။ အဲဒါကို ဟင်းရည်လုပ်သောက်တာ...
ကိုယ်တွင်း မယ်လတိုနင်ဓာတ် လျော့နည်းခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မယ်လတိုနင်ဆိုတာ ပီကျူထရီဂလင်းကထုတ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်းက အိပ်စက်မှုနဲ့ နိုးထတဲ့စနစ်တွေကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပီကျူထရီဂလင်းရဲ့ မယ်လတိုနင်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့် လျော့ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ညဉ့်နက်တဲ့အထိ ပါတီပွဲဆင်နွှဲတာ၊ ညဘက်မှာ အရက်နဲ့ ကော်ဖီသောက်တာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊...
အဆုတ်ကင်ဆာနှင့် သင်္ဘောရွက် Lung cancer and papaya
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး ။ ကျွန်မအဖေမှာ ကင်ဆာရောဂါရှိနေတာ (၃)နှစ် ကြာပါပြီ။ ပထမဆုံးဆေးစစ်ရင်း အဆုတ်မှာအနာဖြစ်တာတွေ့တော့ စင်္ကာပူမှာသွားခွဲပါတယ်။ အဆုတ်ရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ခွဲထုတ်ပြီး အကုန်ကောင်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၃ လ တစ်ခါဆေးသွားစစ်ရင်း ၉...
၊ လရိပ်မေ ၊ ကလေးတွေကို ကြက်ဥကျွေးတာက ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားကောင်းစေတယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်အရ သိရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ခြောက်လကြာ စားပေးရုံနဲ့ ကလေးတွေမှာ ကိုလင်းဓာတ်နဲ့ DHA ဓာတ်ရရှိစေပြီး အဲဒီအာဟာရဓာတ်နှစ်မျိုးလုံးက ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေတယ်လို့ လေ့လာမှုအရသိရပါတယ်။ ကလေးတွေကို...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေ ကိုဆွေတစ်ယောက် မပြောမဆို အိမ်အလည်ရောက်လာပါတယ်။ “ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ရောက်လာလို့ စိတ်မရှိပါနဲ့ ကိုအုန်းကျော် . .ခင်ဗျားကို မေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိလို့ လမ်းကြုံတာနဲ့ ၀င်လာတာပါ” “ရပါတယ် ကိုဆွေ . ....
ချိုင်းအောက်ရှိ အဖု နာကျင်နေလျှင်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ချိုင်းမှာရှိတဲ့ သားနံရည်ကျိတ်ရောင်ရမ်းလာပြီး အလုံးအဖုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအလုံးအဖုတွေ နာကျင်လာတယ်ဆိုရင် ကူးစက်ပိုးဝင်နေလို့ပါ။ ပိုဆိုးတာက ကင်ဆာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချိုင်းမှာရှိတဲ့အဖုက သူ့အလိုလိုမပျောက်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ သတိပြုဆင်ခြင်ရမှာတွေ (၁) ချိုင်းလိမ်းတောင့်နဲ့ ရေမွှေးက...
လေဖက်နာ ကုသနည်းများ (Rheumatoid Arthritis Treatments)
၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊ လေးဖက်နာဆိုတာ အော်တိုအင်မြူးခေါ် ရောဂါပြီးစနစ် ကမောက်ကမဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ ကုသရခက်တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကနေ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ရန်သူလိုသဘောထားနေလို့ဖြစ်တဲ့ အော်တိုအင်မျူးရောဂါတွေ အများကြီးထဲက တခုဖြစ်တယ်။ အဆစ်တစ်သျှူးတွေကို တိုက်ခိုက်နေတယ်။ ဆောရီး။ ရောင်မယ်။ နာမယ်။ နာတာရှည်ဖြစ်တယ်။ တခြားအဆစ်နာ ရောဂါတွေကတော့...